SAWIRRO: Cumar Filish oo xarigga ka jaray wado dib u dhis lagu sameeyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta SAWIRRO: Cumar Filish oo xarigga ka jaray wado dib u dhis lagu...
SAWIRRO: Cumar Filish oo xarigga ka jaray wado dib u dhis lagu sameeyay
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Md. Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Maanta Xariga ka jaray Wadada Jeneraal Daa’uud ee xiriirsa Isgoyska siinaay iyo Boondhere kalana barta Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere ee Gobolka Banaadir.
Wadadaan oo inta u dhaxeysa Isgoyska Siinaay ilaa iyo Boondheere ee aheyd mid aad u bur-bursaned muddo sanado ah ayaa waxa uu Guddoomiye Cumar Filish horey u balan qaaday in la dhisi doonno iyadoona ugu danbeyn Maanta uu xariga ka jaray, Waxa uuna shacabka labada Degmo kula dar-daarmay in ay ilaashadaan kana shaqeeyaan bilicda wadada.
Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere oo munaasabada xarig jarka ka hadlay ayaa ugu Mahadceliyay Duqa Muqdisho ka dhabeynta balanqaadkiisa ahaa dhismaha wadadaan, iyagoona dhankooda balan-qaaday in ay ka shaqeyn doonaan Bilicda wadada.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho ayaa inta uu Xafiiska joogo waxa uu dhisay wadooyin dhowr ah oo muhiim u ah shacabka Gobolka Banaadir kuwaasi oo qeyb ka ah Qorshaha Horumarinta Caasimada.
Previous articleXeer illaaliyaha oo sheegay in la soo gaba gabeeyay Baaritaanka Hay’ad horay looga mamnuucay dalka
Next articleMadaxda IGAD oo war ka soo saaray Arrimaha Doorashada Somaliya